Mhinduro inogoneka kudambudziko reGPS muIOS 8.4 | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | iOS 8, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Zuva iro Apple rinoburitsa vhezheni iyo isina kana nuance, mabhero acharira pasi rese panguva imwe chete. Zvatova zvakajairika kuti uone kuti iyo vhezheni yatichangobva kuisa ine imwe kana isinganetsi bug. Icho chokwadi chekuti yasvika neIOS 8.4 idudu inoita kuti chinzvimbo cheGPS chisave chakarurama. Iko hakuna chirevo chepamutemo parizvino, asi kana iwe uine dambudziko iri, rinogona kugadziriswa munzira dzinoverengeka. Muchikamu chino tinokuratidza dzinoverengeka sarudzo dzinogona kugadzirisa dambudziko rako, dzinogona kukukanganisa iwe kana iwe wakagadzirisa kuburikidza neOTA kana iTunes.
1 Ita reset
2 Deactivate uye gadzirisazve nzvimbo yenzvimbo
3 Dzorerazve network marongero
4 Dzosera uye seta se iPhone nyowani
Tinodzvanya nekubata bhatani rekurara uye bhatani rekutanga panguva imwe chete.
Patinoona apuro, tinosunungura mabhatani maviri.
Deactivate uye gadzirisazve nzvimbo yenzvimbo
Isu tinovhura iwo marongero.
Isu tinotamira kune General / Kurambidzwa.
Isu tinoshandisa izvo zvinorambidzwa (zvinotibvunza isu kodhi).
Kana tangomisikidzwa, tinodongorera pasi to Chakavanzika uye tinopinda Nzvimbo.
Isu tinoremadza "nzvimbo masevhisi".
Isu tinoita reset sezvatsanangurwa pamusoro.
Kana iyo iPhone yatangazve, isu tinodzokera kumatanho 1 kusvika ku5, asi padanho rekupedzisira, isu tinogonesa masevhisi enzvimbo zvakare
Iyi sisitimu yakagadzirisa dambudziko revashandisi vazhinji.
Isu tinotamira kune General / Gadzirisazve uye gadziridza marongero enetiweki.
Isu tinopinda kodhi yedu.
Dzosera uye seta se iPhone nyowani
Kana zvese zviri pamusoro zvikatadza, zvakanaka kutanga kubva 0. Uye sezvo tichidaro, ini ndinokurudzirawo kudzoreredza kubva kuTunes, kwete kubva kuiyo iPhone pachayo.
Kunyangwe iri bhagidhi inogona kunetsa uye dambudziko kune avo imi vanovimba neGPS, zvinoita sekunge kukundikana kwechimwe chinhu chinotakurwa pamusoro kubva pane yapfuura vhezheni pane kukundikana kweIOS 8.4. Chero zvazvingaitika, isu takamirira Apple kuti izivise pachayo uye, kana ikasaita, dambudziko harizove rakapararira zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Uri kusangana nedambudziko reGPS mushure mekuvandudza kune iOS 8.4? Tinokupa dzinoverengeka zvinogoneka mhinduro
Luis Fernando akadaro
Ndakaona kutadza nhasi, chinoshamisa ndechekuti chishandiso changu chine iOS 8.1.2, saka pamwe iko kukanganisa kwese, kupfuura sisitimu yekushandisa. Kwaziso kubva kuMexico.
Pindura Luis Fernando
Zvakanaka, yamira kundishandira kwegore, uye ndaishandisa zuva nezuva kutara nzira dzangu kana ndichimhanya kana nemigwagwa yebhasikoro. Ndakaedza zvese uye hapana .. ndiri kuyedza kudzima uye kumisazve masevhisi enzvimbo sekutaura kwako pamusoro… Kana zvikasashanda… Ini ndichatora iyo PUT * Iphone ndopwanya iyo kumadziro nesimba rangu rese uye ini ndinopika pachangu kuti handizodzoke kuzoshandisa bhuru pane zvigadzirwa zveApple! Ndiri kumusoro kumabhora akafanana! Pamusoroi
Zvakanakisa iwe wakandigadzirira gps kwandiri !!! Ndatenda !!!! 😀 kune izvi uye fekitori gadzirisazve nharembozha asi iwe wakandichengeta ini yakakurudzirwa post !!!
Ndapererwa. Ndisati ndaita sepfuti uye ikozvino ndinofunga nezve kutenga Tom Tom. Ini chete ndinofanira Kudzorera.
Iye zvino ini handiwane iyo WiFi kumba kana kuve 2 metres kubva modem. Ndine IOS 9.3.4
Ndine iOS 9.3.4 uye vezvirwere havandiwani zvakarurama. Ndino buda senge ndiri 4 km kubva kumba kwangu.
Podcast 1x32 yeActualidad iPad: Apple Music, Jailbreak nekuvhara mwaka